I-Tronsmart Yethula i-Apollo Bold, i-Wireless Headphones ene-Hybrid Active Noise Cancellation | Izindaba zamagajethi
I-Tronsmart iveza i-Apollo Bold, ama-headphone angenantambo anokukhanselwa komsindo okusebenzayo
U-Ignacio Sala | | Gadgets
Ngo-2016, i-Apple yethule i-iPhone yokuqala ngaphandle kwe-headphone jack, okuyinhlangano abanye abakhiqizi abayilandele kancane kancane futhi namhlanje kunzima kakhulu ukuthola i-smartphone enalolu hlobo lokuxhuma. Lesi sinyathelo siphoqe abasebenzisi ukuthi shintshela kumahedfoni angenantambo.
Yize i-Apple yayingeyona inkampani yokuqala ukwethula ama-headphone angenantambo, abakwaSamsung noBragi base bevele benikela ngalezi zinhlobo zemikhiqizo, kwaze kwaqala ukwethulwa kwama-AirPod ngo-2016 (ngawo lowo nyaka lapho yasusa khona i-headphone jack) ama-headphone angenantambo aba umkhuba.
Njengoba iminyaka idlulile, izidingo zabasebenzisi azimane nje zidlule kuma-headphone angenazintambo ngokuzimela okuhle, kepha futhi zinikeza ukubaluleka okukhulu ezinzuzweni abangazinikeza. Ngalo mqondo, ukukhanselwa komsindo kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kubasebenzisi abangama-36% ngifuna lolu hlobo lwamahedfoni.
Umkhiqizi weTronsmart usanda kwethula i- U-Apollo Bold, abanye umsindo we-hybrid osebenzayo ukhansela ama-headphone ngokubambisana, futhi, nomkhiqizi weprosesa i-Qualcomm. Ama-headphone amasha we-Tronsmart asebenzisa iprosesa ye-QCC5124, iprosesa engakatholakali kunoma iyiphi enye into emakethe.
I-Tronsmart Apollo Bold, iyahambisana nokukhanselwa komsindo okusebenzayo nokucutshungulwa kwesiginali ye-bluetooth, okuvumela yomibili imisebenzi ukuthi inikeze ukusebenza okuhle kakhulu ukusebenza ngokubambisana. Iningi lama-headphone angenantambo akhona njengamanje emakethe asebenzisa i-chip eyodwa ukuxhumeka kwe-bluetooth kanti enye ukukhansela umsindo okusebenzayo.
Lawa mahedfoni we-Tronsmart amasha aklanywe ngalobu buchwepheshe be-hybridi obukuvumelayo futhi khansela umsindo ezinhlotsheni eziningi, ukufeza umphumela ongcono, okuvumela ukufezekisa ukukhanselwa komsindo okufika kuma-35 dB, nge-dB ephezulu engu-28 enikezwa ama-headphone amaningi angenantambo emakethe.
Okunye okusha esikuthola kulezi headphone ezintsha zeTronsmart ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokudlulisa amasignali obuhambisanayo. Lokhu kuvumela thumela isignali ye-bluetooth ngasikhathi sinye kuwo womabili ama-earbuds angakwesokunxele nangakwesokudla. Ama-headphone amaningi angenantambo emakethe, enye yazo yiyona ethola isignali bese iyidlulisela kwelinye ihedsethi, kwesinye isikhathi engadala ukubambezeleka okuthile ekuvumelaniseni.
1 Imininingwane yeTronsmart Apollo Bold
2 Bamba iqhaza emdwebeni we-Apollo Bold ethile
Imininingwane yeTronsmart Apollo Bold
I-AptX iyahambisana ukunikela ngekhwalithi enhle kakhulu yomsindo.
Ukulahlwa kwe 6 imibhobho ezinikela ngekhwalithi enhle yomsindo futhi evumela nokuthi uhlelo lokukhansela umsindo lunikeze imiphumela emihle kangaka.
It has izindlela ezintathu: I-ANC (ukukhanselwa komsindo), i-Music kanye ne-Transparency (inciphisa umsindo ozungezile ngaphandle kokuzihlukanisa ngokuphelele nemvelo).
Ukuzimela kwamahora angama-30 yokudlalwa komculo ngenxa yecala lokushaja.
Umthwalo ngamunye uyasivumela sebenzisa ama-headphone amahora ayi-10.
Inomsebenzi wokuthi ithola lapho sifaka ama-headphone endlebeni ukumisa isikhashana noma ukuqalisa kabusha ukudlala umculo.
NgoSepthemba kwethulwa isicelo samadivayisi eselula ukuthi Izosivumela ukuthi silinganise umsindo.
Bamba iqhaza emdwebeni we-Apollo Bold ethile
Imbangi eqonde kakhulu ye-Apollo Bold yi-AirPods Pro, kodwa lawa angama-46% ashibhile, ngakho-ke uma isabelomali singacabangi ukukhokha ngaphezulu kwama-euro angama-25o abiza ama-headphone we-Apple, kufanele ucabangele le nketho.
Ukugubha ukwethulwa kwe-Apollo Bold, UTronmart ulungiselele ukunikela, I-raffle ezosebenza phakathi kukaJulayi 15 no-31 futhi esinganqoba ngayo enye ye-2 Apollo Bold raffles.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » I-Tronsmart iveza i-Apollo Bold, ama-headphone angenantambo anokukhanselwa komsindo okusebenzayo
Khipha ama-DVD akho ku-MP4 ngokushesha futhi kalula nge-WinX DVD Ripper
I-SPC Zion Air Pro, enye indlela ye-TWS ngentengo eshintshiwe [Ukuhlaziywa]